Ambovombe Androy : Nosokafan’i Milavonjy Philobert ho an’ i Hery Rajaonarimampianina -
AccueilSongandinaAmbovombe Androy : Nosokafan’i Milavonjy Philobert ho an’ i Hery Rajaonarimampianina
Maro amin’ ireo olomboafidy amin’ izao fotoana izao no mitsapa ny tanjany eo amin’ ny tanàna izay nahalany azy, ary azo tarafina tsara miainga amin’ izany ihany koa ny mety hiverenana na tsia eo amin’ izay fahalaniana sy toky avy amin’ ny vahoaka izay. Io fahatokisan’ny vahoaka io anefa izay tsy azo azo foana fa mifandraika betsaka amin’ ny asa vita teo amin’ ny toerana nahalaniana sy ny olona izay tohanan’ ilay olomboafidy ihany koa. Anisan’ny tazana izao ohatra ny zava-nitranga tany Ambovombe Androy izay nanohanan’ny mponina ny solombavambahoaka Milavonjy Philobert, izay solombavambahoaka lany tany an-toerana, ary manohana ny filoham-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarimampianina. Tazana izany tamin’ ny fahamaroan’ ny olona tonga namaly ny antson’ ny solombavambahoaka noho ny fifampiarabana noho ny taona vaovao, na dia teo aza ny hainandro izay nifafy. Vokatr’izany fitiavan’ny vahoaka an’ i Milavonjy Philobert sy ny fitondrana ankehitriny izay, noho ny asa mivaingana hita sy vita eo amin’ ny distrika Ambovombe Androy, dia nilaza mazava ny solombavambahoaka fa « dia « afodin-tsika ny tanàna , asian -tika vavahady miditra ny tanàna ka izay tena mahavita ihany toy ny filoham-pirenena ankehitriny no vahantsika . Raha toa kosa misy ny mandondona ka mitady hiditra hafa dia ambaraonareo azy hoe lasan’i Milavonjy any Antananarivo ny lakile hoe » hoy hatrany i Milavonjy Philobert.
Ankehitriny mantsy hoy ity solombavambahoaka ity dia maro ireo mamohy fanaratsiana milaza fa tsy misy isika « ankehitriny dia mahagaga mihitsy ny ambaran’ireo mpanohitra fa tsy misy ny asa vitan-tika, hividianantsika solomaso avao izy ireo hijereny izany » taloha aza hoy ingahy solombavam-bahoaka tamin’ ny fotoanan’ny Tetezamita dia “château d’eau’’ iray ihany no vita. Noho izany dia nametraka ny fitokisany tamin’ ny solombavambahoaka milavonjy Philbert tanteraka ny vahoakan’Ambovombe , ary ity farany izay nampanantena fa tsy maintsy hitsidika an’Ambovombe ny filoha Hery Rajaonarimampinina alohan’ ny fetin’ ny fahaleovan-tena , amin’ izany dia maro ny fotodrafitrasa hotokanana . Vahoaka maro sesehena tokoa no ao ambadik’ity solombavambahoaka izay lany tao Ambovombe Androy ity, ary noporofoiny izany nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao ny faran’ny herinandro lasa teo. Maro tamin’ ireo vahoaka izay tonga nanotrona azy avy amin’ny kaominina manodidina no tonga tao amin’ ny renivohitry ny distrika, ary nisy ny nandeha an-tongotra hatrany amin’ny efatra amby enim-polo kilometetra namaly ny fanasana . Nambaran’ ny solombavambahoaka milavonjy Philobert tamin’ ireo vahoaka tonga maro fa efa ela no niandrasan’ Ambovombe ny fandrosoana amin’ ny alalan’ ny fotodrafitrasa sy fijerena ny vahoaka, ka tojo izany ny distrika amin’ izao fotoana izao tamin’ity fitondran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity.
Tsy niandry ela fa vao niandoha ny taona, dia efa nihazakazahan’ireo firenen-dehibe toa an’i Turquie sy Vatican ny fanamafisana ny fifandraisana amin’i Madagasikara. Amin’ity volana Janoary ity avokoa no ho avy eto ny solontenan’izy ireo. ...Tohiny